Profaịlụ ụlọ ọrụ - Shenzhen SOSLLI Teknụzụ Co., Ltd.
Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd dị na Pingshan District, Shenzhen, nke dị n'akụkụ Hong Kong na Macao, yana njem dị mma. Companylọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ aka ọrụ dị elu nwere mmepe, nrụpụta na ire ahịa batrị Lithium Ion nke enwere ike ịgbanye, PACK na batrị. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2008, kpuchie ebe 8,000 square. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 1600, ihe karịrị 110 ndị ọrụ QC ọkachamara na 60 ọkachamara na teknuzu ọkachamara. Ndị ọrụ QC na-enyocha akụkụ niile nke mmepụta site na ịzụta akụrụngwa ruo mbupu ngwaahịa a rụchara. Ugbu a, anyị nwere ngalaba batrị cylindrical, ngwugwu dị nro (Li-polymer) ngalaba batrị, PACK batrị na ngalaba sistemụ nchịkwa. Nmepụta 18650 na 14500 Lithium ion sel ruru 200,000Ah kwa ụbọchị. Anyị na-eji teknụzụ na akụrụngwa dị elu, usoro nchịkwa sayensị sayensị ISO 9001 na ụzọ nchọpụta kachasị mma, hụ na nchekwa na nkwụsi ike nke ngwaahịa a. Ndị ahịa ụwa niile na-anabata ngwaahịa SOSLLI. Anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ike ịnye ndụ dị nchebe, ogologo ndụ, ngwaahịa na ọrụ batrị dị ọnụ ala. Ndị ahịa anyị na-erite uru site na ngwaahịa SOSLLI sara mbara na ikike teknụzụ n'ime batrị E-bike, batrị eletrik, batrị nchekwa nchekwa, batrị ụlọ ọrụ 3C na batrị ahaziri iche. Ngwaahịa a na-eji na ekwentị smart, laptop, smart wearable, ngwaọrụ IoT, igwe dijitalụ, ngwaahịa Bluetooth, ngwaahịa ọkụ, GPS, DVR, E-sịga, E-eze ezé, E-ihe ụmụaka, akụ ike, UPS ike, akwa mmiri dị elu RC UAV na Robots, AGV, ngwaọrụ ike, akụrụngwa ọgwụ, wdg.
SOSLLI agafeela usoro ISO 9001: 2008 sistemu sistemu yana ISO 14001 asambodo sistem gburugburu ebe obibi, ngwaahịa batrị anyị nwetara UL, CB, IEC 62133, CQC, CE, RoHS, KC usoro asambodo ikike, na asambodo metụtara ụgbọ njem na mkpesa MSDS, UN38.3, mkpesa ọnụ ahịa ụgbọ mmiri & ikuku; wdg.
SOSLLI nwere sistemụ batrị dị elu, ụlọ ọrụ akala nká, ngwaọrụ nnwale BMS, 100v nnukwu igwe nnwale batrị Li-ion ugbu a, igwe ịgbado ọkụ akpaka, igwe ntanetị nzacha akpaka na etiti ule. Ogige ule SOSLLI nwere ike nweta: nnwale nchekwa, ule dị elu na nke dị ala, ule gburugburu, okuku na nnwale acupuncture, nwalee ule. Enwere otu 66 R&D 80 pasent bụ ndị injinia nọ elu na ụlọ ọrụ batrị karịa afọ 10. Ebe nyocha na mmepe mmepe na-ekpuchi elektrọnik, ihe owuwu, ọkọnọ ike, teknụzụ PACK, PV, wdg
SOSLLI na-enye ngwaahịa batrị OEM & ODM lithium ion batrị. Ngwaahịa anyị ka eji n'ọtụtụ ụlọ ọrụ soja, ọgwụgwọ, ego, nkwukọrịta, nchekwa, ụgbọ njem, ogbunigwe, lọjistik, ụlọ nkwakọba ngwá elektrọniki na ngwa ahịa.
Anyị na-azụlite mmekọrịta dị mma na Panasonic, Philips, Samsung, voltronicpower, Mindry, BOSCH, DJI, Linde, wdg ndị ahịa ụlọ na mba ofesi. Batrị anyị nwere oke nchekwa gburugburu ebe obibi, nchekwa, ndụ ogologo, ike dị egwu pụrụ iche.
SOSLLI gbalịsiri ike maka ebe dị elu ụwa iji nye ọrụ batrị otu nkwụsị. Nabata na nleta na ịkpọtụrụ anyị.
AKW .KWỌ AK .KỌ
Sili batrị Lithium Ion, Batrị 20ah Lithium Ion, Batrị Lithium batrị, Ngwunye batrị, Ibe batrị Lithium, Batrị Lithium-Ion 3.6v,